Global Voices teny Malagasy » Nanaitra An’i Shina Ny Fanalàna Ny Sivana Tamin’ny “V for Vendetta” · Global Voices teny Malagasy » Print
Nanaitra An'i Shina Ny Fanalàna Ny Sivana Tamin'ny “V for Vendetta”
Voadika ny 10 Janoary 2013 22:39 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Zon'olombelona
V for Vendetta , sarimihetsika iray mampitaintaina, izay efa voaràra hatrany amboalohany tao Shina, novokarina tamin'ny 2005 momba ny fiarahamonina nofinofy iray amin'ny hoavy, no nalefa tao amin'ny China Central Television Station (CCTV) fantsona 6 ny 14 Desambra 2012. Maro no gaga tamin'ny fandefasana azy ity, indrindra ilay sarontava V, izay ampiasain’ ireo mpikomy eran-tany ho mariky ny fanoherana  ny famoretana ataon'ny fitondràna.
Fandefasana sarimihetsika tsy marina ara-politika
Ity video  nampakarin'ny loveforchina  tamin'ny Youtube ity dia ohatra iray anehoan'ireo mpikomy ny fampiasana ny sarimihetsika ho fanoherana ny toe-draharaha momba ny zon'olombelona any Shina :
Izay no mahatonga ny fihetsiky ny CCTV ho vetivety dia lasa adihevitra mafana tao amin'ny sehatry ny bilaogy madinika Shinoa Sina Weibo. Napetraka ao amin'io sehatra io ny huati  [zh], fifanakalozan-dresaka manaraka lohahevitra, izay nahangona tandavan-dresaka maherin'ny 3469 tao anatin'ny fotoana fohy.
Manasongadina [zh] io tandavan-dresaka io ny Trumpet Micro News (喇叭微新聞 :
V ao amin'ny China Central Television Station. Sary namboarin'i tamin'ny alàlan'ny photoshop avy amin'i Kunshou, mpampiasa Twitter.
Amin'izao ora izao! mandefa ny V for Vendetta ny CCTV 6. Angamba izao no fotoana voalohany nandefasana io sarimihetsika io ao amin'ny taniben'ny Shina.
Nanintona olona maro hiserasera io vaovao nisongadina io :
橐橐：Midika ho fisian'ny matoatoa ao am-po [-n'ireo manam-pahefana] ny sivana. Raha vao afaka ny sivana, dia ara-dalàna ny zava-drehetra. Angamba tsy mila ny antoko Kaominista Shinoa hitondra azy Shina, mazava ho azy fa sahoan-dresaka izany eritreritra izany.
叶孤城蝶恋花：Nampientanentana ahy ny nandefasan'ny CCTV 6 ny V ary tsapako taorian'izany rehetra izany fa misy ny fanantenana ho an'ny Fanjakana. Fa tsy azoko hoe nahoana no nosoloina ho “V Don't Move Team” （V字別動隊 – na V Commando Team) ny lohatenin'ilay sarimihetsika ( V Revenge Killing Squad” V字仇殺隊.) Misy afaka manazava ve ?
Hihena ny sivana any aoriana ?
Ankoatra ny lohateny, tsy navoaka ny votoatin'ilay sarimihetsika, araka ny nambaran'ny China Digital Times . Nasongadin'i  [zh] LosAngels Angel fa ny Sampan-draharaham-Panjakana misahana ny Radio, ny sarimihetsika ary ny fahitalavitra (SARF) no tompon'andraikitra mivantana mitantana ny fandaharan'ny CCTV 6, izany no mahatonga ilay hetsika hanana fiantraikany ara-politika :
Ny harivan'ny 14 Desambra, sambany mba nalefan'ny CCTV ilay sarimihetsika voasivana, V for Vendetta. Niteraka adihevitra mafana teo amin'ireo mpiserasera amin'ny aterineto io fanapahan-kevitra io, ny sasany tsy nino ary ny sasany niteny fa resin-tory ny mpikirakira ny fandaharana [ny mpanara-maso]. Na izany aza, araka ny ambaran'ny ao amin'ilay TV dia misaraka ny famokarana sy ny fitantanana ny sarimihetsika ao amin'ny CCTV, ny SARF no tompon'andraikitra mivantana amin'ny fitantanana azy.
Na dia ny Global Times, haino aman-jery ambany fanaraha-mason'ny fanjakana aza, dia nanasongadina ny fihetsiky ny mpiserasera amin'ny aterineto ao amin'ny bilaogy madinikany ary nahasintona tsikera vitsivitsy :
南扉：Na nalefa na tsia ilay sarimihetsika, tsy fanapahan-kevitry ny vahoaka izany. Raha mbola tsy misy fanovàna eo anivon'ny rafitra, tsy afaka hiteny ny vahoaka hoe tsara na ratsy ny mpanjaka.
我愛壹玖捌柒：Ireo izay nanapa-kevitra ny handeha dia efa lasa ary tsy misy miraharaha izay sarimihetsika alefa ny olona. Maninona no tsy alefa ilay sarimihetsika maharitra adiny telo : Tiananmen ?
Cupid_Yes：Nahoana no tsy sokafana ny Great Fire Wall (fanivànana amin'ny aterineto)?
静静的粉玫瑰：Heveriko fa fambara tsara io. Firenena manan-karena kolontsaina Shina. Tsy hitako ny fotoanan'ny ady Lohataona sy Fararano izay nisian'ny sekolinà fotokevitra betsaka nifaninana izy samy izy. Manam-panantenana ny firenena iray rehefa manalalaka ny fisainana sy ny kolontsaina isan-karazany. Amin'izay fotoana izay ihany ny olona no ho afaka hijery ny lanitra voaravaky ny kintana, eo am-pipetrahana ambony fototra mafy.
Nalaky ny fandraisan'ny bilaogera ny vaovao. Gaga ihany koa Brendon Connelly raha nahita  ilay sarimihetsika :
Tsy azoko an-tsaina hoe olona firy tapitrisa no mety nahita ity tantaranà mpikomy misaron-tava mitarika revolisiona iray manohitra ity fitondrana mpanao kolikoly ity, ary tsy misy azontsika atao afa-tsy ny maminavina izay mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny kolontsaina – na angamba tsy hisy. Afaka fotoana fohy angamba, ireny saron-tava V amidy mora ireny dia tsy avy any Shina irery intsony.
Manomboka miova izany ny tantara eo amin'ny fahitalavita Shinoa ? Nandray ny toeran'ny Sekretera Jeneralin'ny Antoko Kaominista Shinoa Xi Jinping ny 15 Novambra teo, ary mety mba hitondra fomba fanao malaladalaka kokoa miaraka aminy izy..
…na angamba tranga maningana ny V. Ny fotoana no hilaza amintsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/11/43943/
 V for Vendetta: http://en.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta_(film)
 mariky ny fanoherana: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/occupy-worldwide/
 Manasongadina : http://weibo.com/1583275637/z9L7J6P46
 nanasongadina ny fihetsiky ny mpiserasera amin'ny aterineto : http://weibo.com/1974576991/z9RqccjBq#1355714869336